Kormeerayaasha Doorashada Soomaaliland oo Ka Walaacsan Nidaamkii Codeynta. – SBC
Kormeerayaasha Doorashada Soomaaliland oo Ka Walaacsan Nidaamkii Codeynta.
Kooxdan Kormeerayaasha ayaa sheegay in dal-daloolooyin ay ka muuqdeen qaabka ay u dhacday doorashada, waxaana ay qireen hanaanka wacyigelinta doorashada ay aad u liidatay, taasoo keentay in dad badan ay
garan waayaan goobaha ay codka ka dhiibanayaan, iyo codod badan oo xumaaday.
Dhinaca kale, waxaa ay sheegeen sidoo kale sheegeen in qaabkii sirta ahaa ee loogu tallo gallay ama ay ahayd in codeeyuhu u dhiibto codka dibadda la soo dhigay ama la khashifay.
Dadka da’da ah ama waayeelka u badan ee u baahnaa in laga caawiyo cidday u codaynayaan la isweydaariyay meelaha qaarkood. Waxaa ay sheegeen in ay warbixin buuxda soo saari doonaan dhawaan.
Dhinaca kale, Cabdiqaadir Jirde oo u hadlay Xisbiga Wadani ayaa ka cawday in mas’uuliyiin ka tirsan xisbiga la xiray, qaarna dhaawacyo soo gaareen sida Faadumo Saciid iyo Xamse Kheye iyaga oo intaasi ku daray in xeerkii lagu tuntay sida muraaqibiintooda oo la saaray, handadaad loo geystay dadkii ka wakiilka ahaa xisbigooda iyo meelo uu sheegay ay Barasaabyada galayaan goobaha codadka lagu tiriyo.